Covid-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Ransomware မထိကြစေဖို့ | Online Service Center Myanmar -->
Covid-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Ransomware မထိကြစေဖို့
Covid-19 ကို လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားပြီး လူတိုင်းကြောက်ရွံ့နေချိန် နည်းပညာပိုင်း၊ Cyber Security ပိုင်းမှာလည်း Covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေ ပေါ်ထွက်လာနေတယ်ဆိုတာသိထားပြီး သတိထားမိကြဖို့လိုပါတယ်။ သိလည်းမသိဘူး၊ သတိလည်းမထားမိဘူး၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ လျစ်လျူရှုထားလိုက်ရင် ခံရမယ့်သူက ကိုယ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အခုလို Ransomware တွေ မြန်မာပြည်မှာ သိသိသာသာနဲ့ထိလာတာ အလွန်ဆုံး ၃ နှစ်၊ ၄ နှစ်၊ ဝန်းကျင်ပဲရှိဦးမယ်ထင်တယ်။ နဂိုက ကွန်ပြူတာ( Desktop, Laptop ) တွေမှာပဲ အထိများခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင် Mobile Phone အသုံးပြုသူများလာတာနဲ့အမျှ Mobile user တွေကို Target ထားတဲ့ Ransomware တွေ အများအပြားထွက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံက ကြောက်ဖို့ကောင်းလို့ လူတိုင်းသတိထားသင့်ပါတယ်။
Ransomware ထိရင် ဘာဖြစ်နိုင်လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Computer, Mobile တွေထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေကို သုံးလို့မရတော့အောင်လုပ်ခံလိုက်ရပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့တောင်းခံထားတဲ့ ငွေကြေးကို ပေးချေလိုက်တော့မှသာ ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေပြန်လည်ရရှိပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ 100% ပြန်ရလားဆိုရင်တော့ မရတာများတယ်လို့ပြောလို့ရသလို ပိုက်ဆံတော့ပေးလိုက်ရတယ် ဘာ Data မှ ပြန်မရဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ၊ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းတွေကို Ransomware မထိဖို့က ကိုယ့်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။
Ransomware က ဘယ်လိုဝင်ရောက်လာနိုင်တာလဲ?
SS ထဲမှာရေးထားသလိုမျိုး တွေ့ကရာ Website တွေဝင်ကြည့်၊ လျှောက်နှိပ် လျှောက်ကလိတာမျိုးလုပ်ရင်၊ တွေ့ကရာ Computer Software, Mobile App, တွေကို Download လုပ်ပြီးအသုံးပြုရင်၊ Email ထဲမှာပါလာတဲ့ Word File, PDF File, Video File, Photo File, လိုမျိုးတွေကို ဖွင့်ကြည့်မိရင် Ransomware ထိနိုင်ပါတယ်။
Ransomware မထိအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ?
တွေ့ကရာ Website တွေလျှောက်မဝင် လျှောက်မကလိပါနဲ့၊ တွေ့ကရာ Software, Mobile App, တွေကို Download လုပ်ပြီးမသုံးပါနဲ့၊ Email ထဲမှာပါလာတဲ့ Word File, PDF File, Video File, Photo File, လိုမျိုးတွေကို အလွယ်တကူဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့၊ မဖြစ်မနေ ဝင်ကြည့်မှရမယ်၊ ဒေါင်းသုံးမှရမယ်၊ ဖွင့်ကြည့်မှရမယ်၊ ဆိုခဲ့လျှင် ကိုယ်ဝင်ကြည့်မည့် Website address, Download ပြလုပ်ထားသည့် File, Email ထဲမှာပါလာတဲ့ File, တွေကို ဒီတိုင်း လက်လွတ်စပါယ်ဖွင့်မကြည့်ပဲ www.virustotal.com
လိုမျိုး Website ထဲမှာထည့်ပြီး Scan ဖတ်ပြီး Safe ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသာ ဝင်ကြည့်၊ ဖွင့်ကြည့်၊ သုံးကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Ransomware ကို သတိထားပြီးရှောင်ရှားကြပါလို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။
Aung Kyaw Soe ( 16.3.2020 - 10:58 AM )
SS ထဲမှာပါတဲ့ မူရင်းပို့စ် => https://www.facebook.com/lolsecmm/posts/1321720024703934
အားလုံးပဲ ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အနေနဲ့ သတင်းအမှားဖြန့်ဝေမှုများကိုတွေ့ရှိလာပါက ဒီ Group လေးထဲမှာ ပြန်လည်လာရောက်ပြီး တင်ပေးကြစေလိုပါတယ်။
သတင်းအမှန်များသိရှိနိုင်ရန်အတွက်လည်း သတင်းအမှန်များကို Information Sharing ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီ COVID-19 သတင်းအမှားတင်သူများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေး Group လေးထဲကို Join မထားရသေးဘူးဆိုရင် အခုပဲ Join ပြုလုပ်ပြီး သတင်းမှန်များ၊ သတင်းမှားတင်ထားသည့်များကို လာရောက်တင်ပေးကြပါဦး။
Group ထဲကို Join လိုပါက ...
Web Address: https://www.facebook.com/groups/Covid19infoMyanmar
#Covid19 #Coronavirus #FakeNews #FactChecking
#Covid19FakeNews #CoronavirusFakeNews #FakeNewsCovid19 #Covid19FactChecking